यी हुन् सवैभन्दा पुराना विश्वविद्यालयहरु, यस्तो छ इतिहास
हालसम्मैकै पुराना विश्वविद्यालयका बारेमा कमैलाई थाहा छ । विश्वविद्यालयको अवधारणा भने पुर्विय दर्शन रहेको यी विश्वविद्यालयहरुको इतिहासले देखाउँछ भन्ने धेरै विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । आउनुहोस् हेरौ कुन कुन रहेछन् त विश्वकै सबैभन्दा विश्वविद्यालयहरु
१. तक्क्षशिला विश्वविद्यालयः
कुनै समय भारतवर्षमा रहेको यो विश्वविद्यालय हाल पाकिस्तानमा रहेको छ । यो विश्वविद्यालयको स्थापना ६०० बिसी र ५०० एडीको बिचमा गन्धार राज्यमा भएको मानिन्छ । हाल यो राज्य पाकिस्तानमा पर्छ । कुनै समय भारतवर्षको भुभागमा रहेको यो विश्वविद्यालयमा ६८ वटा विषयहरुमा पढाइ हुन्छ । वेद, व्याकरण, दर्शन, एस्ट्रोनोमी, मेडिसिन, सर्जरी, लडाइबारे, राजनीति, संगीत आदि बारे पढाइ सञ्चालन हुदै आइरहेको छ ।
यस विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न कम्तीमा १६ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । त्यो समयमा १० हजार ५ सय विद्यार्थीहरु यस विश्वविद्यालयमा पढ्ने गर्थे । चीन, बेवीलोन, सिरिया तथा ग्रिसबाट पढ्न आउने विद्यार्थीहरुको ठुलो जमघट यो विश्वविद्यालयमा हुने गथ्र्यो ।
२. नालन्दा विश्वविद्यालय
यो विश्वविद्यालय सन् ५०० देखि सन् १३०० मा सञ्चालनमा आएको बताइन्छ । यस विश्वविद्यालयलाई विदेशी शक्तिहरुले आक्रमण गरी ध्वस्त पारेका थिए । यस विश्वविद्यालयमा ३०० लेक्चर हलहरु, ल्याबहरु, लाइब्रेरहिरु र अब्जेबेटरीहरु रहेका थिए । चिनीयाँ यात्रीहरुको राखेको रेकर्ड अनुसार करिब १० हजार विद्यार्थीहरुलाई २०० प्रोफेसरहरुले पढाउने गर्थे ।
गुप्ता ऐजमा यस विश्वविद्यालय रहेको बताइन्छ ।
३. अल–कराओइन विश्वविद्यालय, मोरक्को
अल–कराओइन विश्वविद्यालय मोरक्कोमा अवस्थित रहेको छ । यो विश्वविद्यालय पहिला मस्जिदको रुपमा स्थापना गरिएको थियो । फतिमा–अल–फिहिरीले सन् ८५९ मा स्थापना गरेकी थिइन् । प्राकृति विज्ञानमा अध्यापन गराउँदै आइरहेको यस विश्वविद्यालयमा सन् १९५९ मा नयाँ विषयहरुमा अध्यापन गर्न थालियो ।
४. अल अजहर विश्वविद्यालयः इजिप्ट
यो विश्वविद्यालय सन् ९७०–९७२ मा इजिप्टमा फातिमिडको सामराज्यमा स्थापना भएको थियो । यस विश्वविद्यालयमा अरेबिक साहित्य र सुन्नी इस्लामिक धर्मबारे अध्यापन गराइन्थो । अब भने यस विश्वविद्यालयमा मोर्डन विषयहरुमा पढाइ हुन्छ । यसको लाइबेरीलाई इस्लाकिम साहित्यको खजना मानिन्छ ।
५. अल निजामियाः बग्दाद–इरान
सन् १०६५ मा यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको थियो । ख्वाजा निजाम अल–मूल्कले यस विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याएका थिए भने विस्तार गर्न विभिन्न ठाउँमा यस विश्वविद्यालयको शाखा पनि खोलेका थिए ।
मिडियाबल वल्र्डमा यी पाँच विश्वविद्यालयहरु सबैभन्दा ठुला विश्वविद्यालयहरु थिए ।